Miro - Wikipedia
Miro sidoo kale loo yaqaano Midho (Reer aw xasan waa beel kamid ah‎ Af-Taliyaani : frutto Af Ingiriis : fruit) waa maxsuulka taranka geedka. Midhuhu waxay ka samaysmaan marka bacariminta ubaxu dhaco, waxaana badhtanka ku jira lafta tafiiranka dhirta.
Noocyo badan oo Midhaha ka mid ah isla markaana kala duwan.
Midhuhu waa cunto la cuni karo. Miraha badankooda waxay dhexda kuleeyihiin hilib macaan oo lacuni karo.
Midhuhu weey kala duwan yihiin, qaarkood waa sun aanu xayawaanku cuni karin, qaar kale aad ayay u macaan yihiin oo bini aadanka iyo noolaha kale ayaa quuta. Luuqad ahaan midhaha waxaa loo yaqaan kuwa hilibka haragga ama maqaarka hoostiisa ku leh, kana sii hooseeyaan miro (dib loo abuuri karo) sida: tufaaxa, cambaha, liinta, canabka seeytuunka iyo kuwa la midka ah. Dhinaca kale, waxaa jira midho (dalag)kale oo aan loo aqoon midho sida: digirta, galeeyda, masagada, bariiska iyo kuwa la midka ah. Midhuhu, sida badan waxaa eey ka sameeysmaan wax ka badan hal ubax oo isu tagay (bacrimay). Ka dib bacrimintaas, midhuhu waxaa uu ka abuurbaa hal ubax si midhuhu uga helo nafaqo joogto ah geedka uu ka abuurmayo. Midhahaas marka uu bilaabmo koritaankiisa, waxaa uu yeeshaa harag ama maqaar si hilibkii gudaha uGu abuurmo ugana xafidmo ciida iyo cayayaanka. Ka dib waxaa uu maraa koritaan badan sida: cagaar aan la cuni Karin iyo inuu weeynaado oo ka dibna bislaado.
Miraha beerta Ceeden.Edit
Ilaahay baa miro abuuray. Aadan iyo Xaawa waxay ku noolaayeen beertii Ceeden. Taasi meel qurux badan bay ahayd oo waxaa ku yaallay webi iyo geedo miro leh iyo xayawaan kala duwan baa ku noolaa. Ilaahay Aadan wuu ka mamnuucay inuu cuno geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta. Ilaahay wuxuu ku yiri geedaha mid ka mid ah waxba ha ka cunina.
↑ Sidee Bay Noloshu Ahayd Bilowgii?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Miro&oldid=219523"
Last edited on 14 Oktoobar 2021, at 04:50
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Oktoobar 2021, marka ee eheed 04:50.